Matambudziko emazibundu? Zvokudya zvekudzivisa | Bezzia
Matambudziko emazibundu? Zvokudya zvekudzivisa
Tony Torres | 11/05/2022 20:00 | Matipi ehutano, Nutrition
Kana uine acne matambudziko unofanira kudzivisa kushandiswa kwezvimwe zvokudya zvinowedzera ganda muzviitiko izvi. Kutaura zvakafara, ndizvo zvese izvo zvikafu zvine mafuta akawandisa uye zvakakangwa chikafu. Asi kune iyo rondedzero iwe unogona kuwedzera zvikafu zvingaite sezvisingakuvadzi, asi vavengi vakuru veganda vanotambura neacne. Zvokudya zvine utano, izvo zvinosanganisira zvokudya zvinodzivirira ganda uye zvisingabatanidzi izvo zvinorikuvadza, ndicho chimwe chezvishandiso zvikuru mukurwisa mburwa.
Zvisinei, matambudziko eganda anowanzokonzerwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana, izvo zvakakosha kunyorera rubatsiro rwevashandi vehutano. Nokudaro, kunze kwekuvandudza kudya kwako kutarisira utano hweganda rako, unofanira kuenda kune dermatologist kuitira kuti anyatsoongorora dambudziko rako. Ndizvo chete uchawana kurapa kwakanakisisa kwezvinetso zvako mburwa.
1 Ndezvipi zvekudya zvekudzivisa kurwisa mburwa
1.2 masaga ebhegi
1.3 zvokudya zvine mafuta akawanda
1.4 masiwiti akagadzirwa
Ndezvipi zvekudya zvekudzivisa kurwisa mburwa
Usati wabvisa chero chikafu kubva pakudya, zvakakosha zvikuru kuonana nachiremba kuti udzivise kushayikwa kwezvokudya. Chero chipi nechipi chinorambidzwa pasina kutonga kwechiremba chinogona kuva nengozi kune hutano, saka zvakakosha tsvakiridzo yekuona kuti zvese zvinofamba zvakanaka. Kana chiremba wako akakupa iwe kuenda-mberi, unogona kubvisa zvimwe zvekudya zvinoita kuti acne iwedzere.
Zvokudya zvakakangwa ndeimwe yevavengi vakaipisisa veacne, sezvo mafuta akawanda uye kupisa kwakanyanya kunodiwa kubika chikafu chakadai. Mafuta aya anonyura muchikafu, anorishandura kuita bhomba rakakora izvo zvinoita kuti uwedzere kilos uye kune avo vane matambudziko eganda, dambudziko rakakomba riri kuzowedzera zvakanyanya. Sarudza dzimwe nzira dzakareruka dzekubika, tora fryer yemhepo uye udye mbishi mafuta omuorivhi. Saka iwe unogona kutora mukana wakazara wezvese zvakanakira chikafu ichi chine hutano.
Zvese zvakagadziriswa svutugadzike zvine ngozi akazara mafuta kune hutano munzira dzakawanda, kusanganisira mamiriro eganda. Angave machipisi, zvimiti kana chero mafomati emabhegi esnack, mhedzisiro yacho yakafanana. Nechikonzero ichi, ivo vanofanirwa kubviswa kubva mukudya kwako kana ukavadya nguva nenguva, nekuti ganda rako richavandudza zvakanyanya nekuchinja.
zvokudya zvine mafuta akawanda
Zvese izvo zvekudya zvine mafuta akawanda hazvikurudzirwe kana iwe uchida kudzora mburwa. Pakati pavo pane iyo chorizo ​​​​mune chero shanduro dzayo, bhakoni, bhotela kana chero rudzi rwenyama ine mafuta akawanda. Zvakanakisisa kusarudza miriwo, michero, mapuroteni akaonda uye nyemba, izvo zvinopa kudya kwako nezvokudya zvinodiwa uye iwe uchakwanisa kurwisa. matambudziko eganda.
Industrial pastries haifanirwe kuve chikamu chekudya kwako kana iwe uchida kudzora acne. Aya marudzi ezvigadzirwa ane zvakawanda zvakakura zve mafuta akazara uye zvinhu zvinokuvadza hutano. Nokudaro, kana iwe usingadi kusiya imwe nguva inotapira, zviri nani kuigadzirira kumba nezvinhu zvakasikwa.
Kunyanya ultra-processed pizzas kana idzo dzinobva kumaresitorendi echikafu. Ichi chigadzirwa chine mafuta akawanda mune zvakawanda zvezvishandiso zvavanogadzirirwa nazvo, saka inova bhomba rakakora risingaenderane nekutarisirwa kweacne. Kana iwe uchida kudya pizza nguva nenguva, zviri nani kuigadzirira kumba nenzira yeunyanzvi, uchisarudza hutano hwakanaka.
Muchidimbu, zvokudya zvaunofanira kubvisa kubva pane zvaunodya kuti udzore acne ndezviya zvose zvine mafuta akawanda uye izvo, muchidimbu, zvine ngozi kune hutano hwako munzira dzose. Izvi zvigadzirwa zvinowedzera mamwe kilos, kuvhara tsinga uye kukonzera matambudziko eganda kunge mburwa. Naizvozvo, kuvabvisa kubva mukudya hakungobatsiri kuvandudza mburwa, asi zvakare kuchaita kuti hutano hwako huwedzere.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Matipi ehutano » Matambudziko emazibundu? Zvokudya zvekudzivisa
Ungaziva sei kana mumwe wako ariwo shamwari yako yepamoyo
Zhizha Ruzha, muunganidzwa wemutambo weSpringfield